Isihlomelo sestudiyo sanamhlanje, esizimeleyo eCardiff
Isihlomelo esandula ukuguqulwa kwindawo enamagqabi eCardiff eLlandaff, iikhilomitha nje ezi-2 ukusuka kumbindi wesixeko. Ukujulwa kwelitye ukusuka kwisitalato esiphakamileyo sasekhaya kunye neekhefi kunye neeresityu, i-gastro pub yasekhaya iHeathcock kunye neLlandaff Cathedral. Ukukhwela iteksi nje ngemizuzu eli-10 okanye umgama omhle ongama-40 uhamba ngeBute Park, ikuse kwiBala Lemidlalo lasePrincipality, iCardiff Castle kunye neSophia Gardens. Zonke zisembindini wesixeko esilikomkhulu. Kakhulu, simahla kwindawo yokupaka isitrato ekhoyo ngaphandle kwepropathi.
Indawo ebanzi ye-studio ye-ensuite, isiseko esifanelekileyo sokuhlola iCardiff kunye nommandla ongqongileyo. Indawo enkulu ibandakanya ibhedi ephindwe kabini, i-sofa yezihlalo ezintathu, itafile egobekileyo kunye nekhitshi. Ikhitshi linesinki ephindwe kabini, imicrowave, phantsi kwekhawuntara yefriji enendawo yokukhenkcisa, iketile kunye nethosta. Uya kufumana kwakhona iipleyiti, izitya, izinto zokusika kunye neeglasi ezikhoyo. Igumbi lokuhlambela langoku elinomgangatho wokufudumeza phantsi libandakanya iWC, isinki, isipili esikhulu esikhanyayo kunye nesimbo sebhastile, ishawari ezimeleyo. Kukwakhona nezinto zokulala neetawuli.
Siyathanda ukwamkela iindwendwe kwaye samkele imibuzo okanye imibuzo ngokusebenzisa umyalezo we-airbnb. Noko ke, njengoko isihlomelo sisecaleni kwekhaya lethu, siyakuvuyela ukunikela icebiso ngokobuqu ukuba likho.